mParticle: Na-anakọta ma Jikọọ Data Ndị Ahịa Site na API echekwara na SDKs | Martech Zone
Onye ahịa anyị na-arụ ọrụ na nso nso a nwere ụkpụrụ ụlọ siri ike nke jikọtara ọnụ na ikpo okwu iri na abụọ ma ọ bụ karịa ebe ntinye. Nsonaazụ bụ ọtụtụ mbiputegharị, nsogbu ogo data, yana nsogbu na ijikwa mmejuputa ọzọ. Ọ bụ ezie na ha chọrọ ka anyị tinyekwuo na ya, anyị tụrụ aro ka ha mata ma mekwaa Platform Ahịa Ndị Ahịa (CDP) iji jikwaa ebe ntinye data niile n'ime sistemụ ha, melite data ha ziri ezi, rube isi n'iwu dị iche iche, yana ime ka ijikọ usoro ndị ọzọ dị mfe.
mParticle Ahịa Data Platform
Akụkụ nwere API siri ike ma nwee nchedo 300+ na-emepụta ngwa mgbakwunye sọftụwia (SDKs) ka ị nwee ike ijikwa data ndị ahịa gị nke ọma, tinye njikọta ọsọ ọsọ, ma hụ na data gị dị ọcha, dị ọhụrụ, na nnabata. Ha n'elu ikpo okwu na-enye:
Njikọ data - Anakọta data na API echekwara na SDK ma jikọọ ya na ngwaọrụ na sistemụ niile nke otu gị. Nweta data ndị ahịa ebe ịchọrọ ya n’enweghị nsogbu nke njikwa koodu ndị ọzọ. Ntinye na sistemụ mgbasa ozi, nyocha nyocha, nyiwe ọrụ ndị ahịa, sistemụ azụmaahịa sistemụ njikwa, usoro nhazi nkwenye, na nyiwe nche dị site n'ofe 300+ SDKs. Nwere ike ibu data n'ime nnukwu data nkwakọba ihe ngwọta gụnyere Amazon Redshift, Snowflake, Apache Kafka, ma ọ bụ Google BigQuery na ezigbo oge. Ma obu, n'ezie, ị nwere ike iwekota nyiwe gị site na API ha siri ike.
Ogo data - Mee ka data ndị ahịa gị dịkwuo mma ma tinye data dị mma site na ịhazi, ijikwa, ma kwado data ndị ahịa tupu e kesaa ya na sistemụ dị ala.
Ọchịchị data - Jikwaa nkwado na iwu nzuzo nke data ma kwado mkpa gọọmentị nke nzukọ gị. Chebe nzuzo nke ndị ahịa gị site na ịkọwapụta data, nnabata CCPA, ajụjụ GDPR, njikwa nkwenye GDPR, nchekwa data PII, ma jikwaa nnabata na nkwenye na Otu na-atụkwasị obi.
Nhazi nke data nke data - Mepụta ahụmịhe nkeonwe site na iji data ndị ahịa na akụkọ ihe mere eme. Mepụta ndị na-ege ntị, gbakọọ njirimara, profaịlụ onye ọrụ omnichannel, na ojiji LiveRamp iji nyefee ahụmịhe ndị ahịa nke onwe.
Jikọọ na ọkachamara mParticle iji kwurịta otu esi ejikọ ma dezie data ndị ahịa ụzọ ziri ezi maka azụmahịa gị.
Lelee mParticle niile Choputa mParticle Demo
Tags: Mmekọrịta AdTechntinye mgbasa oziRedshift Amazonnchịkọta nchịkọtaApache KafkaAPIntinye ntinye ihe omumeakpaakannukwu datacdpahịa dataahịa data apiAhịa Data Platformngwakọta ọrụ ndị ahịanchịkọta data nhazi usorodata nkwakọba datammekorita oru egoGugulu BigQueryAkụkụSnowflakengwungwu ngwanrọ